तिब्र रुपमा कोरोना: के फेरि होला त लकडाउन ? यसो भन्छन् - स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा - Jagaran News Jagaran News
तिब्र रुपमा कोरोना: के फेरि होला त लकडाउन ? यसो भन्छन् – स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा
Published On : 13 January, 2022 4:08 pm
काठमाडौं, पुस २९ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ । एकाएक कोरोना तिब्र रुपमा अगाडि बढिरहको छ । कोरोना संक्रमण बढेसंगै सरकारले विद्यालय बन्द गरिसकेको छ भने केहि नयाँ नियम जारी पनि गरिसकेको छ ।
यसरी फेरि पनि कोरोनाको ग्राफ ओकालो लागि रहदा आमजनमासमा लकडाउन हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । यो चिन्ता धेरै जसो त व्यवसायी गर्ने ब्यापारीलाई भएको छ । यता यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले भने सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
बिहीवार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमपछि बोल्दै मन्त्री खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरुको कुरा सुनेर लकडाउन गरेपनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताएका हुन्।
मन्त्री खतिवडाले भने, ‘शुरुका बेलामा आतंक बढी भएको हुनाले एक, दुई वटा सामान्य लक्षण देख्दा पनि यसको उपचार लकडाउन भनेर गर्‍यौँ। जति जानेको थियो त्यति गर्‍यौँ। विश्वमा, युरोपेली देशहरुमा लकडाउन भनेको सुन्यौँ, यो नयाँ कुरा भयो, त्यसैअनुसार गर्‍यौँ। हामी पनि आतंकित भयौँ। गर्नुपर्ने बेलामा गरेनौँ, अघि पछि गर्‍यौँ। त्यसले केही मृत्युदर घटायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर त्यसले परेको शैक्षिक क्षेत्रको असर, औद्योगिक, राजश्व, सामाजिक क्षेत्रका अनेक कामहरुलाई पुगेको क्षति, नदेखिने यो क्षति मृत्यु भन्दा पनि भयावह ढंगले भयो। त्यसैले अब हामी आत्तिएर, मात्तिएर लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा छैनौँ।’
उनले माघको दोस्रो हप्तामा ६० वर्ष माथिको उमेर समूहका नागरिक र तेस्रो वा चौथो हप्ताबाट आम नागरिकहरुलाई कोरोना बिरुद्धको बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने बताए।
मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्यकेन्द्र जानका लागि सहज बनाउन सरकारले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाएको उल्लेख गर्दै नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह गरे। कोरोना खोप लगाउन अस्पतालमा भीड भइरहेको प्रशंगमा मन्त्री खतिवडाले विभिन्न अस्पताललाई खोप केन्द्र बनाइएको र अझै थप गरेर भीड हुन नदिने बताए।
केहि सयम संक्रमण घटेको थियो तर फेरि तेस्रो लहर आएको हुँदा सबैमा डर त्रास कायम भएको छ ।
जाडो मौसममा रुघाखोकीबाट बच्ने उपाय यस्ता छन्, थाहा पाइराखौं
काठमाडौं, पुस २९ । रुघाखोकी लगाउने भाइरस जाडो महिनामा चाँडै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिन
काठमाडौं , पुस २९ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग
स्वास्थ्यमन्त्रीले पछिल्लोपटक गरेका सबै सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं ,पुस २९ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लोपटक गरिएका सबै कर्मचारीको सरुवा रोक्न स्वास्थ्य तथा
नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजी थप्ने तयारी, यी हुन् दाबेदार
काठमाडौं, पुस २९ । नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजीको दरबन्दी थप्ने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, पुस २९ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ । एकाएक
काठमाडौं, पुस २९ । कोरोनाभाइरस संक्रमण बढेपछि शिक्षण संस्था बन्द भएसँगै सप्तरीका विद्यार्थी र